The Ab Presents Nepal » चर्चित मोडल तथा नायिका आशा खड्का २५ अौं जन्मदिन मनाउँदै!
चर्चित मोडल तथा नायिका आशा खड्का २५ अौं जन्मदिन मनाउँदै!
नेपालि कलाकारिता जगतमा एक चिर परिचित नामा हाे आशा खड्का। हास्य बिधामा जस्तासुकै चरित्रलाइ पनि सहजै ढंगबाट निर्वाह गर्न पारंगत छन उनि । हर्के हल्दार देखि अन्य थुप्रै हास्यटेलिचलचित्रमा छाप छाेडिसकेकि आशा रिसानि माफ टेलिचलचित्रमा निकै नै रूचाइयकि अभिनेत्रि या भनाै पात्र हुन।
बाल्यकाल देखिनै संर्घष गरेर दुख सुख हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको आशा खड्काको साथमा अहिले ममि बाहेक कोही छैन । बाबाले सानै उमेरमा छोडेर अर्की बिहे गरेर अलग्गै बसेपछि परिवारमा अहिले उनी र आमा मात्र छन् । रुँदा पनि ममि सँगै हास्दा पनि ममि सँगै हाँस्ने बताउँछिन् ।
म्युजिक भिडियोमा समेत आफूलाई उत्कृष्ट मोडलको रुपमा चिनाउन सफल मोडल आशा खड्काको आज २५ अौं जन्म दिन परेको छ । बाल्यकाल देखिनै सालिन र भद्र स्वभावकि उनी घरकी कान्छी छोरी हुन् । बाबाको साथ नपाएपनि आमाको साथमा रमाउँदै आइरहेकी छिन् ।
आशा खड्कालाई हाम्रो तर्फबाट जन्मदिनको लाखौंलाख शुभकामना !